Noravàn’ny ISIS i Dair Mar Elia, Monasiteran’ny Kristianina Tranainy Indrindra Ao Iraka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2016 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, čeština , 日本語, English
Monasiteran'ny Masindahy Elijah, Mosul, Iraka – monasiteran'ny kristianina tranainy indrindra ao Iraka. Sary avy amin'i Doug, tao amin'ny Wikimedia Commons, GFDL
Noravain'ny ISIS ny monasiteran'ny Kristianina tranainy indrindra, Dair Mar Elia, araka ny tati-baovao nivoaka androany [fivoahan'ny lahatsoratra teny anglisy]. Ny monasitera, fantatra amin'ny teny Anglisy hoe Monasiteran'ny Masindahy Elia, dia naorina tamin'ny taona 595, ary miorina ao Ninawa, atsimon'i Mosul, izay toerana mampatanjaka ny vondrona milisy ao Iraka.
Na dia rava aza, dia mbola nanohy nitsidika ny monasitera vita amin'ny vato ny mpanao fivahiniana masina kristianina, izay ahitana trano fiangonana sy fitoerana masina, ary koa tahirin-drano manodidina sy loharano mineraly voajanahary. Mampiseho korontam-bato nisian'ny fotodrafitrasa niorina teo amin'ny havoana ny sary zanabolana navoakan'ny Associated Press, izay namoaka ny tantara.
Tao amin'ny Twitter, nizara sary tsy misy daty nalainy tao Dar Mar Elia talohan'ny faharavany i Maya Alleruzzo, mpamoaka sarin'ny AP ao Afovoany Atsinanana, monina ao Kairo. Hoy izy nisioka:
Tsy haiko ny mamaritra ny fihetseham-po tamin'ny nitsanganana eny amin'ny toerana izay tsy misy intsony
Naneho ny hatezerany sy ny tsy finoany ireo hafa maro tao amin'ny Twitter:
Misioka i Fawzi Shingali avy ao Iraka:
Nodarohan'ny ISIS baomba i Dair Mar Elia, monasitera tranainy indrindra ao Iraka. Naorina talohan'ny Islamo izany. Namono olona izy ireo, nandrava trano, ary nitondra korontana eto an-tany.
Hatramin'ny fibodoana ny faritra midadasika ao Iraka sy Syria, noravan'ny ISIS izay rehetra miendrika “fivadiham-pinoana” mifanehatra aminy, mandrava ireo toerana fahiny, anisan'izany ny Nineveh, Nimrud sy Hatra, izay voatendry na notendren'ny UNESCO ho Toerana Anisan'ny Vakoka Manerantany.
Toerana manan-tantara 10 noravan'ny ISIS sy ny maha-zava-dehibe azy ireo
Avy ao UK, miantso ny fiarahamonina iraisampirenena i James Noyes mba “handinika indray” ny paikadin'izy ireo hiarovana ny toerana ara-kolontsaina sy ara-tantara lehibe indrindra tahaka izao, indrindra fa vitsy ny fifanarahana iraisampirenena miantoka ny fiarovana azy ireo.
Manazava ny fijeriny tamin'ny andiana sioka izy:
Averina indray, ny zava-mitranga tahaka ny fandravana ny Dair Mar Elia dia mampiseho ny tsy fahombiazan'ny valintenin'ny iraisampirenena manoloana ny fandravana vakoka.
Tsy manampy ny toerana tahaka ny Deir Mar Elia ny fifanarahana UNESCO. Fifanarahana miankina amin'ny fisian'ny fandriampahalemana ireny, ary matetika tsy raharahian'ireo mpanao sonia.
Ny fampiasan'ny tafiky ny mpibodo na ny tafi-panjakana ny toerana sokajiana ho toeram-bakoka dia fanitsakitsahana ara-teknika ny Fifanarahan'i Hague: fihetsika maneho tsy fanajana
Ary manana ny olan'ireo vondrona miasa ankehitriny (tahaka ny IS) isika izay mandà ny tsirinkevitry ny vakoka ara-kolontsaina sy ny soatoavina manerantany.
Ary mety manontany isika: manoloana ny tsy fanajana sy ny tsy fankatoavana, ahoana no ahafahan'ny fifanarahan'i Hague hiaro tokoa ny toerana tahaka an'i Deir Mar Elia?
Tena ilaina tokoa ny mandinika indray ny fomba hiarovan’ ny fiarahamonina iraisampirenena ireo toerana manana vakoka ara-kolontsaina lehibe indrindra amin'izao toe-draharaha misy ankehitriny izao.
Tamin'ny volana Febroary tamin'ny taon-dasa, nodoran'ny ISIS ny Tranombokin'i Mosul, nanimba ireo boky sy sora-tanana an’ hetsiny izay efa naharitra 800 taona ny sasany.
Nilatsaka teo am-pelatanan'ity milisy ity tamin'ny volana Jiona 2014 i Mosul, tanàna faharoa lehibe indrindra ao Iraka ary eo ambanin'ny fifehezan'ny vondrona mpisintaka tao amin'ny Al Qaeda malaza, izay miady ao Syria ihany koa ankehitriny.